Fanararaotana vehivavy malemy :: Zandary sandoka nanolana ny rafozam-baviny • AoRaha
Sady tsy vitan’ny efa misandoka ho zandary ity lehilahy iray, teny Antohomadinika, fa mbola nahavanon-doza noho ny fitiavana ny filàn’ny nofo ihany koa, afak’omaly. Nosamborin’ny zandary avy eny Ankadilalana izy.
Nilaza ho zandary ny lehilahy sady miasa eny amin’ny Fiadidiana ny Repob­lika. Fantatra fa ny rafozam-baviny ihany no niharan’ny herisetra ara-nofo nataony.
Nisy nampandre ireo zandary eny Ankadilalana ny amin’ny fisian’io zandary manolana vehivavy lehibe iray, teny Antohomadinika, io. Nidina teny amin’ilay toerana ny mpitandro filaminana nijery ny zava-nisy. “Efa voa­sambotry ny komitin’ny fandriampahalemana ilay lehilahy. Rehefa nahita an’ireo zandary izy dia nilaza fa zandary Kilasy faharoa ao amin’ny Toby Ratsimandrava ary miasa eny amin’ny Fiadi­diana ny Repoblika. Nasehony mihitsy ny karatra maha zandary sandoka rehefa nanontaniana ny karany”, hoy ny fanazavana azo avy amin’ny zandarimaria eny Ankadilalana.
Vehivavy efa malemy noho ny fahatapahana lalan-dra io naolan’itsy lehilahy misandoka ho zandary itsy io. Tsy vitan’izay fa rafozam-baviny ihany koa. “Mbola nahitana taratasy fiantsoana tsy misy anarana avy amin’ny sampan-draharaha misahana ny heloka bevava an’ny zandarimaria eny Fiadanana tany aminy”, hoy hatrany ny loharanom-baovao.
Naterina eny amin’ny tobim-paritry ny zandarimaria, eny Betongolo, ny lehilahy, taorian’ny fisamborana. Voatazona ao anaty fonjakelin’ny zandarimaria izy, hatramin’ny afak’omaly. Manohy famotorana momba ity lehilahy misandoka ho mpitandro filaminana ity ireo zandary. “Niantsoana mpitsabo ilay vehivavy lehibe, taorian’ ity tranga ity. Tsy misy mampa­nahy ny fahasalamany”, hoy ireo mpitandro filaminana.
Fanafihana teny an-dalana :: Pasitera nandeha môtô voaroban’ ny andian-jiolahy
Voina an-dranomasina :: Lehilahy frantsay namoy ny ainy nazeran’ny môtô